UPAUL MCCARTNEY: UMCCARTNEY / UMCCARTNEY II UPHONONONGO LWEALBHAMU - IINDABA
Ukwahlula iminyaka elishumi, ii-albhamu zokuqala zeBeatles ezibizwa kuphela kuPaul McCartney zizibini ezingaqhelekanga, kodwa akufuneki zijongwe.
Kukhutshwa ngaphandle kweminyaka eli-10, UMcCartney kwaye UMcCartney II zii-albhamu ezimbini zokuqala zeBeatles ekufuneka zibhalwe kuphela kuPaul McCartney, ngaphandle kwamaphiko okanye uLinda McCartney. Ngale ndlela, kuyavakala ukuba ziphinde ziphinde zenziwe ngaxeshanye, kodwa iimeko zabo zangaphambili zazingafani ngokwahluka. Ngo-1970, xa iikopi zangaphambili ze UMcCartney bathunyelwa kwiintatheli, babandakanya iphepha lokushicilela elibhengeza ukumka kukaPaul kwiiBeatles, ezaye zanefuthe elibi ekuphuleni iqela. UMcCartney wakhululwa kwinyanga ephelileyo Makubenjalo , kwaye yayiqulathe isixa esifanelekileyo somculo owawukhathalele ixesha elithile. UMcCartney II Kwelinye icala, wakhululwa ngo-1980, malunga nonyaka ngaphambi kokuqhekeka kweeWings, ibhendi eyayingazange ibe ngaphezulu kwesithuthi kwimizamo yokubhala ingoma kaMcCartney.
Amaphiko ayengenaye uJohn Lennon wokudlala kuMcCartney. U-Lennon noMcCartney, njengoko wonke umntu esazi, babengamaqabane okubhala iingoma enza iiBeatles amandla anje nge-titanic ngeminyaka yoo-1960. Ngexesha lokuqhekeka kwebhendi, nangona kunjalo, ubambiswano lwaluchithwe iminyaka. Aba babini babehlala bebhala bodwa ngokwahlukeneyo, kwaye kula ma-albhamu aseBeatles asemva kwexesha, unokuva ukuba ubuntu babo buyahlukana. Ukwahlula kugqitywe kwii-albhamu ezizimvo ezimbini zangaphambili zeBeatles ezakhutshwa ngo-1970 IPlastiki yeOno Band inzima, imbi, iyazixakekisa, ayisiyonto incinanana, kwaye izinikele ekubekeni elona hlobo lweemvakalelo kunye neenkumbulo. Kusibekele UMcCartney okoko yakhululwa.
UMcCartney luhlobo olwahlukileyo lwealbham. Kuqala, masithethe ngesihloko. Eli ligama ebelibhangqiwe noLennon, lahlulwe ngeslash, kangangeminyaka-- besingasetyenziselwa ukuzibona zodwa. Xa amajelo eendaba aqhuba amabali kuMcCartney, wayehlala 'enguPaul' nje. Ngewayibizile icwecwe lakhe UPaul McCartney , kodwa ngokungqalileyo akazange. Ndicinga ukuba wayefuna ukuba abantu babone igama lakhe phaya njengekhredithi yokubhalwa kwengoma, ngaphandle kwesimaphambili. Kwaye i-albhamu yakhe ayenzileyo inezinto ezifanayo nezo zikaLennon, naye. Babelana ngento eluhlaza, umnqweno obonakalayo wokufuduka kubunewunewu be-1969's Indlela yeAbbey , icwecwe lokugqibela iBeatles elibhalwe kunye. Kodwa apho ukuvela kwe IPlastiki yeOno Band Idlala emsindweni, ukuba ndlongondlongo, kunye nokuphoxeka, uburhabaxa be UMcCartney isandi kuphela. Irekhodi linomtsalane we-homepun, kwaye uvakalelo olucebisa ukuba uMcCartney wayengazibeki uxinzelelo olukhulu kuye ukuze aqhubeke nelangatye laseBeatles okanye enze ingxelo.
UPaul wadlala yonke into kwirekhodi ngokwakhe, ngaphandle kwamazwi axhaswayo nguLinda, erekhoda okuninzi ekhaya kwikhondo eline. Akukho zodwa ezikhutshiweyo, kukho izixhobo zomculo ezininzi, kwaye konke kuyinto encinci, uhlobo lwealbham olusezandleni zeemvumi ezininzi ezinokuthi ziboleke ekuchazeni. Kwaye u UMcCartney ayisixeleli okuninzi malunga noMcCartney. Njengombhali wengoma, wayengekho (kwaye nangoku, hayi), uhlobo lokuvuma izono. Ukuya kuthi ga kwinqanaba, uMcCartney ngumdlali weqonga ozingoma zakhe ziphakathi. Uthando lwakhe ngoLinda, lubonakaliswe ngokungathandabuzekiyo ' Mhlawumbi ndiyamangaliswa ', Ngokwenene wayenyanisile, kodwa wabhala esi sigulo sokugqibela somsakazo we-FM njengengoma yothando yakudala. Xa wanikwa ithuba lokuba ayeke ukulinda kwaye asibonise ukungaziphathi kakuhle, uPaul McCartney akazange akwenze -kwesi simo sisondeleyo, iingoma zakhe zihlala zikhutshiwe kwaye zinikezelwe ekuphumezeni ukufikelela kwinqanaba elithile.
Amagqabantshintshi eacwecwe zikaMcCartney zamva zodwa zazihlala ziziingoma eziphezulu, okanye ezinkulu, ii-tunes zokumisa, kodwa apha, ngaphandle kokuthi 'Mhlawumbi Ndimangalisiwe', iincopho zibandakanya iinguqulelo ezimbini zengoma enye ethe cwaka, ' Ingxubevange '. Inguqulelo yezwi elinqabileyo inika uMcCartney ohamba kunye negitare ye-acoustic kunye ne-bass kunye ne-percussion, ekhathaza uluhlu lwezinto ezingasasetyenziswanga. UMcCartney Kamva iphinda iphinda i-'Junk 'kwi-'engoma' kunye ne-instrumental version, kunye ne-mellotron kunye nepiyano ukujoyina i-waltz enhle. Ndingothuka ukuba uElliott Smith akafundanga nto kuyo. Ininzi yalo lonke icwecwe labhalwa kwaye larekhodwa, kwaye ibonisa- uMcCartney udlala ngesingqisho sesiLatin (' ULinda othandekayo '), intwana yeblues (' Iya kuba yinto '), kunye nokubopha, isiqingatha sexesha lesizwe pop (' Umntu Wayenesizungu '). ' UTeddy Boy Ukubalisa ibali, kwaye kufutshane ' UKreen-Akrore 'UMcCartney uzama ngendlela yakhe engaqhelekanga, ehlekisayo eneepateni zeedrum zebhola kunye neziphumo zesandi.
Olo hlobo lokulinga kunye nokusilela kwepolishi yayiyinto uMcCartney angakhange azivumele kwimizamo eyedwa kamva. Njengoko i-70s iqhubekile, wabuyela ekwenzeni ubuqili obukhulu, kwaye wafumana amanqaku ambalwa. I-RAM , UVenus noMars , kunye Ibhendi ekubalekeni isikhundla phakathi kweyona albhamu ibalaseleyo yeeBeatles, kwaye zonke zibonisa uhlobo lwesitudiyo sokugqibelela esasingekho UMcCartney . Vula UMcCartney II , ipolishi ikhona, kodwa oko ngokuyinxenye kuphuculo kwitekhnoloji yokurekhoda ekhaya- UMcCartney wenze okuninzi kokurekhodwa kwifama yakhe eScotland, kwaye kukho uxinzelelo oluphantsi olufanayo, nantoni na eya kwimveliso yokugqibela. Oko kwathiwa, le albhamu inokuba yinto engathandekiyo kuMcCartney okanye kumlandeli weBeatles. Ininzi kuvavanyo, inikezela uninzi lweengoma zayo kwi-synth-pop ye-eccentric eyothusayo njengayo nantoni na ukusuka kwiintsuku zokuqala zamaza amatsha, kwaye ayizizo zonke ezinyanzelisayo.
UMcCartney II 'vula kwaye uqale ungatshatanga,' Yenyuka ', Ukuchitha akukho xesha lokungena kanye kule ndawo yothusayo, nenxalenye yegitala ebinokuphakanyiswa kwingoma yeNtloko yeeNtetho, iihoksi zebuzzy zebhodi, kunye namazwi afumana uMcCartney ecula ngesihluzi kwaye ezixhasa nge-quirky falsetto. Idiski kaMcCartney izaliswe zizinto ezingaqhelekanga kunye novavanyo, kubandakanya ixesha lokugqibela kunye neeSuper Furry Izilwanyana kunye noMlilo, kodwa le ayiqhelekanga ngendlela awayeyibonisa ngayo njengeyona ndawo iphambili kwimveliso kuneprojekthi esecaleni.
Kwenye indawo kwi-albhamu, uMcCartney uhlala kunzima kwi-pigeonhole. Ukuba ndikuxelele isixhobo ' Igumbi elingaphambili ', Ngomatshini wayo wegubu lomculo kunye nengoma yelibhodi enelanga, yayiyibhlog ka-2009 eyabethwa ngumsebenzi we-lo-fi synth, uya kundikholelwa. Kwaye kukho ' UNobhala Wethutyana ', ingoma ecaphukisayo kodwa enomdla edibanisa inkqubo ye-synth ene-frenzied synth kunye nelizwi elingaqhelekanga- uMcCartney ucula njengempumlo kangangoko kunokwenzeka kwi-refrain, kwaye ayenze ibe ngathi i-robotic. Ezinye iingoma zijikile kolu hlobo lwendlela yobuninzi. ' Ingoma yosuku lwehlobo intle kwaye inqabile, inika uMcCartney kunye neekhibhodi ezimbalwa. Ukuhanjiswa kwangaphambili kweTLC ' Iingxangxasi Icacile nangakumbi, kuphela nguMcCartney kunye nepiyano yombane, enedoli encinci yesinth kunye negitare yomculo.
Ezinye iingoma ezimbini ziyema UMcCartney II , kwaye zahlukile omnye komnye njengoko le rekhodi isuka UMcCartney . Icwecwe kufutshane ' Olunye lwale mihla 'ilungile nje, ixhamla kwindlela yokurhabaxa esusa ii-synths kunye noomatshini begubu abalawulayo UMcCartney II . Umkhondo webhonasi ' Mhlobo Ofihlakeleyo ', ibandakanyiwe kwidiski yesibini yale nto iphinda ikhutshwe, ikwayinto entle yokuwisa umhlathi- umzuzu we-10, is synth opus eqhutywa ngumoya ekwabelana ngezinto ezininzi ngokufanayo ngomculo wokudanisa kwiminyaka elishumi isencinci. Nangona ethotyelwe kwicala le-B 'likaNobhala weThutyana' ongatshatanga, 'uMhlobo Ofihlakeleyo' uphakathi kwezona zinto zikhangeleke phambili uMcCartney azibhalile kwimisebenzi yakhe yasemva kweBeatles.
Abo UMcCartney II izinto ezongeziweyo zime ngokuchaseneyo nezinto zebhonasi ze UMcCartney , eyona nto ingabalulekanga- iingoma ezihambayo ziimidlalo zika-1979 kunye neeWings, ezingakhanyisi apho uMcCartney wayengumculi ngexesha esenza i-albhamu. Sekunjalo, UMcCartney lirekhodi elihle kakhulu kwaye lifanelwe olunye ukujongwa. Kwaye eli lixesha elifanelekileyo lokujonga kwakhona UMcCartney II , nangona iziphene zayo. Icandelo le-albhamu livakala ngokungaqhelekanga ngoku; Kunzima ukulinganisa ukuba ngaba UMcCartney II yayinempembelelo yokwenyani kwi-synth-pop yee-80s, kodwa ukusasazeka kwayo kunye nomoya oshukumayo omncinci ngokuqinisekileyo ungqinelana nomculo omninzi wakutshanje owenziwe kumatshini we-synths kunye negubu. Nangona isibini esingaqhelekanga ngeendlela ezininzi, ezi albhamu zimbini zimela iikona zomculo kaMcCartney, kwaye kufanelekile ukuba uphinde uzifumane.
amatye aqengqelekileyo abhala kuwe
iintaka emgibeni mfutshane film
I-trilogy yeveki yevinyl
umculo kwizikhululo zeenqwelo moya brian eno
ingoma edumileyo ngo-2014